जिम्मेवारी बिहिन यी मन्त्रीहरु अझै राज्यको तलब सुविधाकै लागि मन्त्रीमा झुन्डि रहन मिल्छ ? « Postpati – News For All
जिम्मेवारी बिहिन यी मन्त्रीहरु अझै राज्यको तलब सुविधाकै लागि मन्त्रीमा झुन्डि रहन मिल्छ ?
काठमाडौं, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ३१ मै जिम्मेवारीविहीन बनाए पनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । कुनै काम र जिम्मेवारी नहुँदा पनि तलब-सुविधाकै लोभले राजीनामा नदिएको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १६ (नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्री) मन्त्री साढे दुई महिनादेखि बिनाविभागीय छन् । सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँसमेत नभए पनि उनीहरू सरकारी गाडीमा अंगरक्षकको जत्थासहित हुइँकिइरहेका छन् । तलबभत्ता बुझ्ने मात्र नभएर अधिकांश पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै बसिरहेका छन् ।
चुनावमा हारेपछि पनि सत्तामा टाँसिइरहनेहरूले साधन-स्रोतको दुरुपयोग धेरै गरेका छन्, हामीले त के गरेका छौं र !’ – प्रभु साह, बिनाविभागीय मन्त्री
अर्का बिनाविभागीय मन्त्री प्रभु साहले आफूहरूले भन्दा पनि अब प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘चुनावमा हारेपछि पनि सत्तामा टाँसिइरहनेहरूले साधनस्रोतको दुरुपयोग धेरै गरेका छन्, हामीले त के गरेका छौं र ? ’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
१७ पुष २०७४ मा प्रकाशित